Hogaamiyaha mucaaradka Rwanda oo la xiray - BBC News Somali
Hogaamiyaha mucaaradka Rwanda oo la xiray
Image caption Diane Shima Rwigara waxay ka mid tahay mucaaradka Rwanda
Haweeney ka mid ah hogaanka mucaaradka Rwanda, Diane Shima Rwigara, ayaa la xiray ayada iyo xubno ka tirsan qoyskeeda, sida laga soo xigtay idaacad Waddanka dibadiisa ka hadasha oo la yiraahdo radio Itahuka iyo barta internetka ee Rugali.
"ilo wareedyo ayaa sheegaya in rag hubaysan oo dharka rayidka qaba ay habeenkii oo dhan guriga banaankiisa joogeen oo ay sugayeen ilaa waagu ka baryo oo irridda guriga la furo. Ka dib guriga ayey gudaha u galeen, waxayna qoryo ku qabteen Diane Rwigara iyo qoyskeeda" ayaa lagu sheegay hadalkaas laga soo xigtay labadaas il.
Isla ilahaas waxay kaloo sheegeen in fiidnimadii ay Diane iyo dhamaanba xubnaha qoyskeeda u kaxaysteen meel aan la garanayn, halkaasoo ay ilaa iminka ku haystaan.
Booliska Rwanda waxay beeniyeen wararka sheegaya inay ka dambeeyaan xarigga Diane Shima Rwigara iyo hooyadeed.
Dukumentiga ay Rwigara ugu tartamaysay doorashadii madaxtinimada ee dalkaas ka dhacday 4 Agoosto ayaa waxaa ku gacan sayray guddiga doorashooyinka, ayadoo loo cuskaday inay ku guul darraysatay tiradii laga doonayey saxiixyada ee u saamaxayay in ay doorasho u soo istaagto.
Guddiga doorashada ayaa ku eedeeyey in saraakiisheedu ay maleegeen been abuurka 26 saxiix. Waxaa laga doonayey inay soo gudbiso 12 saxiix oo ka yimaada 30ka degmo ee Rwanda degmo kasta, si loo ansixiyo murashaxnimadeeda.